युगसम्बाद साप्ताहिक - सस्तो बजारका सस्ता सामान र मन्त्री
Thursday, 05.28.2020, 02:16am (GMT+5.5) Home Contact
सस्तो बजारका सस्ता सामान र मन्त्री
Tuesday, 04.24.2018, 01:20pm (GMT+5.5)
एउटा मन्त्रीको काम के हो ? उसले सम्हालेको मन्त्रालयको जिम्मेवारी के हो ? मन्त्री मन्त्रालयमा बसेर मन्त्रणा गर्ने कि सस्तो लोकप्रियताका लागि सुरुवालको इजार कस्दै भाषण गर्न कुद्ने ? यो प्रश्न आम नेपालीको हो र हामीले लामो समयदेखि यस्तै देखिआएका छौं । मन्त्रीको काम भनेको सभा, समारोह वा कुनै कार्यक्रममा उद्घाटन गर्ने, विमोचन गर्र्नेे । अर्थात् पानसमा बत्ती बाल्ने, रिवन काट्ने, भाषण गर्ने अनि जाने । यो क्रम दिनमा थुप्रैपटक हुँदैआएका छन् । मन्त्री भनेको उद्घाटन नै गर्ने हो, कार्यक्रममा गएर भाषण मात्रै गर्ने हो भन्ने भान आमरुपमा छ ।
कतिपयले विगतमा उद्घाटन गर्ने काममा जान्न भने । तर, पारा उही ! मन्त्री भएपछि त्यस्तो कार्यक्रममा गएन भने चर्चा नै नहुने । संचार माध्यममा छाउनै नसकिने । हुन पनि हो गतिलो काम गरे पो चर्चामा आउनु, संचारमा छाउनु । काम गर्नु केही छैन । बगम्फुसे भाषण गरेरै कार्यकाल बिताउनेहरु धेरै थिए र अहिले पनि छन् ।
के हामीले यो प्रथा तोड्न सक्दैनौं । कार्यक्रममा मन्त्रीलाई बोलाउने चलन हटाउन सक्दैनौं ? मन्त्री नै बोलाउनुपर्ने कार्यक्रम भैरहेका हुन्छन् त ? त्यस्तो नभए पनि राजनीतिक दलसंग निकट रहेका संस्थाको कार्यक्रम हुन्छ, मन्त्री नगए पार्टीभित्र बिरोध सुरु हुन्छ । विचरा मन्त्रीहरुलाई मात्र के दोष ? विषयगत कार्यक्रममा जानुपर्छ, विज्ञहरुका कुरा छन् भने झनै जानुपर्छ र सुन्नुपर्छ । तर हाम्रा मन्त्रीहरु कार्यक्रमको अन्त्यतिर पुगेर छेउ न टुप्पोका भाषण गरेर फर्कन्छन् । आयोजकलाई मन्त्री आए पुग्यो । त्यसबाट देशलाई, समाजलाई के लाभ भयो ? त्यो वास्ता छैन । मन्त्रीसंग बसेर फोटो खिचाउन पाए सबैलाई पुग्यो ?
अब देश समृद्धको दिशातिर लम्कन्छ भनिएको छ । वर्तमान सरकारले काम गर्ने दृढता जनाएको छ । तर, मन्त्रीहरुलाई अझै पनि सम्मान खान, दोसल्ला र खादा भिर्न अनि किलोका किलो फूलको माला लगाउनमै फुर्सद छैन । कसैलाई गृह जिल्लामा, कसैलाई सम्बन्धित जातीय संगठनले, कसैलाई कुन व्यवसायीले, कसैलाई कसले सम्मान गर्ने गरिरहेका छन् । यो सम्मानको अर्थ के होला ? नाजायज लाभ लिन चाकरी गरेको हो कि वा मन्त्रीलाई राम्रो कामको शुभकामना दिन मात्र ?
अब समय आएको छ । मन्त्रीहरुले जस्तोसुकै कार्यक्रममा नजाने वातावरण बनाउनुपर्छ । बरु यसका लागि मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर एउटा “उद्घाटन मन्त्री”का रुपमा विनाविभागीय मन्त्री राखेर उनलाई नै सबै उद्घाटन, विमोचन, सभा, सम्मेलनको अतिथि बनाउन पठाइदिए कसो होला ?
हुन त प्रधानमन्त्री नै सानातिना कार्यक्रममा गएर मीठा भाषण गरेर वातावरणलाई हँसाउँदै, फुर्काउने गर्नुभएकै छ भने उहाँका मन्त्रीहरुले गरे त के भयो ? तर, यसको असर मुलुकको समृद्धिमा र विकासमा कति पर्छ भन्ने ख्याल गरिएको छ कि छैन ? एउटा मन्त्रीले दिनको दुईवटा उद्घाटन गर्दा खर्च हुने समय मन्त्रालयमा बसेर विकासका योजनामा खर्च गर्ने हो भने त्यो कति लाभकारी हुन्छ । अर्कोतिर यसले मन्त्रीहरुको गरिमा पनि बढाउँछ ।
अबको समय भाषण हैन, काम गर्ने हो । दुई तिहाई बहुमतको सरकारका मन्त्रीहरु पनि उद्घाटन, भाषण, विमोचनमै अल्मलिने हो भने काम गर्ने कसले ? केही मन्त्रीहरुले कामको संकेत दिइसकेका छन् । तर पनि उनीहरुको समय भेटघाट, उद्घाटन, रिवन काट्नमै खर्च भैरहेको छ । त्यसैले अब मन्त्रीहरुलाई विषयगत बाहेक अन्य कार्यक्रममा उपस्थित नहुने गरी आचारसंहिता नै लागू गर्नुपर्दछ ।
तपाईले देखेको समृद्ध नेपालको सपना पूरा गर्ने तपाईका सारथि मन्त्रीहरु नै हुन् । उनीहरुले पूरा समय लगनका साथ काम गरे भने मात्र तपाईको सपनाले साकार रुप लिनेछ । यसका लागि तपाईले नै उनीहरुलाई आचारसंहितामा बाँध्नुपर्दछ । अनि कम्तिमा आफ्नो पार्टी र पार्टीका भातृ–भगिनी संगठनले आयोजना गर्ने कुनै पनि कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री–मन्त्रीलाई नबोलाउने निर्णय गराउनु पर्दछ ।
किनभने “परिवर्तन चाहनेले पहिला आफूमै परिवर्तन ल्याउनु पर्दछ” । तपाईले त्यसो गर्नुभयो भने सम्मानको नाममा पैसा तिरेर मन्त्रीका हातबाट सम्मानपत्र लिने र दोसल्ला ओढ्ने–ओढाउनेहरु घट्नेछन् । काठमाडौंमा केही वर्षयता ‘तपाईलाई फलानो मन्त्रीको हातबाट सम्मानित गरिंदैछ, हाम्रो संस्थालाई अलिकति आर्थिक सहयोग गर्नुप¥यो’ भन्दै मन्त्रीको नाम बेचेर पैसा कमाउने धन्दा चलिरहेको छ ।
अब कार्यक्रममा जाने कि नजाने व्यक्तिको इच्छा होला, तर मन्त्री एक व्यक्ति मात्र हैन । उ चौबीसै घण्टा राष्ट्रको सेवक हो । उसले आफूलाई ‘सस्तो बजारको सस्तो सामान’का रुपमा हैन, देश निर्माणको योद्धाका रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ, यसका लागि उनीहरुले उद्घाटन, विमोचन जस्ता कार्यक्रम हैन, विकास आयोजनाको अनुगमन, निरीक्षणतिर समय व्यतित गर्नुपर्दछ ।
अब यस्ता कार्यक्रमहरुमा मन्त्री नभै नहुने हो भने एकजनालाई ‘उद्घाटन मन्त्री’ बनाएर राखे कसो होला ? हैन भने कामगर्ने समयमा मन्त्रीहरु हलभित्र निदाउने हो भने त्यसको के अर्थ, पविर्तनको के महत्व अनि समृद्धि नेपालको सपना कसरी पूरा होला ? आगे यहाँहरुको मर्जी !